छुर्पी उत्पादनमा पाल्पा नमुना बन्दै
पाल्पा–पाल्पामा उत्पादित छुर्पी नेपालकै नमुना बन्दै गएको छ । पाँच वर्षअघि मात्र छुर्पी खाउ, सुर्ती हटाउन भन्ने अभियानका साथ पाल्पामा उत्पादित छुर्पीले व्यवसायिक रुप लिन थालेको हो ।
जिल्ला पाल्पामा वार्षिक सात मेट्रिकटन जिल्ला बाहिर निर्यात हुदैँ आएको छ । छुर्पीका लागि इलाम र पाँचथर नमुना मान्दै आएपनि पछिल्ला वर्ष उत्पादित छुर्पीले पाल्पाली पहिचान बनाउन सफल बनेको छ । पाल्पामा उत्पादित छुर्पी नेपालकै उत्कृष्ट मानिएकोले यसको माग स्वदेश तथा विदेशमा समेत रहेको छ ।
जिल्ला पशु सेवा कार्यालय पाल्पाका प्रमुख डा. प्रदिप शर्माका अनुसार जिल्ला सदरमुकाम तानसेनमा रहेका श्रीनगर दुग्ध डेरी र गोरस घरमा उत्पादित छुर्पी नेपालकै उत्कृष्ट मानिन्छ । प्रशस्त दुध उत्पादन हुन थालेपछि पाल्पामा ठूलो मात्रा छुर्पी उत्पादन गरी दुधको खपत बढेको हो ।
किसानले उत्पादन गरेको दुध उपभोक्ता वितरण गरेपछि बाँकी रहेको दुध खेर फाल्न नपरोस भनी डेरीले छुर्पी उत्पादन गर्न थालेपछि नाम र दाम समेत कमाउन सफल छन् । व्यवासायिक रुपमा उन्नत गाईपालन गर्न थालेपछि दूग्ध डेरीले छुर्पी उत्पादनप्रति आकर्षित भएका छन् । वार्षिक ४५ लाख रुपैयाँको छुर्पी पाल्पा बाहिर निर्यात हुदैँ आएको छ । हाल १ करोड चालिस लाख रुपैयाँको छुर्पी अझै स्टकमा रहेको श्रीनगर दुग्ध डेरीका सञ्चालक रोमक्रान्त न्यौपानले बताउनुभयो ।
छुर्पीको लौरालाई ८ सय र काटेको छुर्पीलाई ९ सय रुपैयाँ प्रतिकिलो विक्री गर्न बाध्य भएको डेरीका सञ्चालन रोमक्रान्त न्यौपानले बताउनुभयो । इलामको फिकल भन्ने ठाउँमा करिब एक महिना छुर्पी बनाउने तरिका सिक्न गएर आएपछि दैनिक २१ सय लिटर भन्दा बढीको छर्पी उत्पादन हुदँै आएको उहाँको भनाई छ ।
पाल्पामा छुर्पी खाउ, सुर्ती हटाउन भन्ने अभियानका साथ उत्पादित पाल्पाली छुर्पी स्याङ्गजा, पोखरा बाग्लुङ्ग, काठमाडौ, रुपन्देही, नवललपरासी र नारायणघाटमा खपत हुदैँ आएको छ । १० हजार मेटिकटन छुर्पी अझै स्टक रहेको छ । गत वर्ष ७५ सय मेट्रिकटन बाहिर पठाएको गोरस घरका सञ्चालक टिकाराम खरेलले बताउनुभयो ।
जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले जिल्लालाई दुध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम विगतका वर्षमा सञ्चालनमा ल्याएपछि पाल्पा जिल्लाका दुग्ध डेरीले छुर्पी बनाउन थालेका हुन थालेको प्रमुख डा. प्रदिप शर्माले बताउनुभयो । पाल्पामा उत्पादित छ मेट्रिकटन छुर्पी जिल्ला बाहिर खपत हुदैँ आएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख शर्माले बताउनुभयो ।
जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले जिल्लालाई दुध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम विगतका वर्षमा सञ्चालनमा ल्याएपछि पाल्पा जिल्लाका दुग्ध डेरीले छुर्पी बनाउन थालेसँगै बीस जना भन्दा बढी डेरीमा नै रोजगार पाउन सफल भएका छन् ।
तामाका भाडा बनाउने पेशा लोप हुदैँ